दैनिक बिहान खाली पेटमा किशमिशको पानी खानुहोस्, शरिरमा हुनेछन् यस्ता फाइदा - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it मौसम अनुसारका के–के खानेकुराहरु खाँदा स्वास्थ्यमा फाईदा हुन्छ ? वर्षा ऋतु (असारदेखि भदौ )
Up Next जिम गर्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् यी कुराहरु
खानपान, भान्छामा औषधी
बासीभात खानुका यति धेरै फाइदा रहेछन्, अब बासी भनेर नफाल्ने कि ?
हुन त कुनै अन्न फाल्नु हुदैन । अझ हाम्रो मुख्य खानाका रुपमा रहेको भात फाल्नु झन् खराब हो । यो…
नीम जति तितो छ यसको फाइदा पनि त्यति नै मिठो छ । नीमको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्ता रोगहरु ठिक पार्छ, जान्नुहोस्
स्वास्थ्यको लागि धेरै किसिमले फाइदाजनक छ । नीम, हाम्रो शरीर, छाला तथा कपालको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक औषधि हो । तर…
यी खानेकुरा खानुहाेस् , राेगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुहाेस्
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने भन्नेबित्तिकै भिटामिन एप्लिमेन्ट सेवनमा धेरैको ध्यान जान्छ । तर, आफ्नै वरपर रहेका सर्वसुलभ कुरालाई भने बिर्सन्छौं…
कस्ताे हुन्छ लगनशील व्याक्ति ? जान्रुहाेस्
सफलताकाे लागी लगनशीलता र धर्यताकाे आवश्यकता हुन्छ । लगनशीलता र धर्यताकाे कमीले नै धेरै मानिसहरूले आफुले सुरू गरेकाे काम बिचमै…
त्यहि आमा हो, दुखमा पनि हाँसेर तिमिलाई हँसाउन खोज्ने – आमाको माया (भिडियोसहित)
कुनै एकान्त ठाउँमा गएको बेला आमा सम्झे मन रुन्छ । बढी न्यास्रो लाग्छ अनि आमाभन्दा आँसु र्झछ । नजिक भए…
आलु र सुजीलाई एकैचोटि मुछेर पुरी बनाउन यसो गर्नुहोस्
विधि सबभन्दा पहिले एउटा भाँडोमा तीनवटा आलुलाई मिच्नुस् । अब आलुमा हींग, ज्वानो, खुर्सानीको धूलो, मेथी, चाट मसला, धनियाँको धूलो,…
राेग प्रतिराेधी क्षमता भएका केहि पेय पदार्थहरू यस्ता छन्
स्वस्थ रहनका लागि आफूलाई रोगबाट बचाउन जरुरी हुन्छ । र रोगबाट बच्न रोगप्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत हुनुपर्छ । आफ्नो खानामा त्यस्ता…
बिहान उठ्ने बित्तिकै दिनकाे सुरूवात कसरी गर्ने, जान्रुहाेस्
भनिन्छ, सुन्दर बिहानीले सुन्दर दिनकाे सँकेत गर्छ । हाम्राे जिवनमा अनेक उतारचढाव अाउँछन् । तर ति उतारचढावलाइ व्यवस्थापन गर्दै सन्तुलित…
मांशाहारी हुनुहुन्छ भने तेज दिमागका लागि माछा
यदि तपाईं मांशाहारी हुनुहुन्छ भने सकेसम्म माछा र माछाबाट बनेका खानेकुरा बढी खाने गर्नुस्, जसले तपाईंको मस्तिष्कलाई सधैं ताजा र…
One thought on “दैनिक बिहान खाली पेटमा किशमिशको पानी खानुहोस्, शरिरमा हुनेछन् यस्ता फाइदा”
Raghu Nandan Yadav
घरेलु उपचार (49)